10 Tsy Misy Bullsh * t Manasonia ny Fangatahanao taloha: Ahoana no hahalalana tsara - Fifandraisana
10 Tsy Misy Bullsh * t Manasonia ny Fangatahanao taloha: Ahoana no hahalalana tsara
Mieritreritra ianao fa mety te hiverina any aminao ny olon-tianao taloha.
Saingy tsy azonao antoka izany.
Ny exe dia faritany sarotra raha miresaka ny eritreritrao sy ny fihetseham-ponao.
Toa tsy ho vitanao ny mamantatra raha toa ny sakaizanao taloha na tsia tena maniry ny hiverenanao, na raha mamaky diso fotsiny ireo famantarana ianao.
RAHA ianareo te hiverina izy ireo, mety ho voadinao ny fandikana ny fihetsik'izy ireo ho famantarana fa mitovy ny fahatsapany izany, satria izany no tianao ho hita sy ho re.
Raha nahita ny tenanao tamina toe-javatra iray izay heverinao fa mety haniry mafy hiara-hiaraka aminao ny olona taloha, dia mety manontany tena ianao hoe ahoana no ahafahanao mahalala an'io azo antoka.
Raha tsikaritr'izy ireo izy ireo naneho vitsivitsy amin'ireo famantarana manaraka ireto, ary misy zavatra ao amin'ny tsinainao milaza aminao fa marina izany, izany dia fampisehoana tsara fa liana amin'ny famerenan-javatra indray izy ireo.
1. Mifandray izy ireo.
Raha toa ny olona sasany toa mahavita misaraka ary tonga dia mpinamana akaiky indrindra, dia izany no ankanavaka fa tsy ny lalàna.
Ara-dalàna ho an'ny olona roa izay nisaraka fa tsy mifandray intsony mandritra ny vanim-potoana lehibe, na dia mahavita miteraka finamanana avy eo aza.
Raha ny marina, raha manandrana mifampiresaka ianareo dia matetika no zavatra mahasalama indrindra.
Raha izany, raha tsy nitsahatra nifandray ianareo, dia mety ho fambara fa tsy lasan'izy ireo mihitsy ny fifandraisanareo.
Rehefa dinihina tokoa, raha mbola nifankahita manokana na nandefa hafatra ianao dia tsy nanana fotoana tsotra nifanaovana.
Etsy ankilany, mety ho tapaka ny fifandraisanao, fa izao nifandray indray ry zareo.
Misy zavatra milaza aminao fa tsy nahatratra izy ireo satria nanapa-kevitra izy ireo fa mety ny fotoana hisarahanareo roa.
Tandremo sao hadika amin'ny fomba diso ny karazana fifandraisana rehetra.
Tsy ny sms rehetra no atao mitovy. Raha mandefa alina anao amin'ny alina izy ireo na mitandrina ny zavatra tsy tokony hatao, dia mety hahatsiaro ho manirery izy ireo na mamono fotoana mandra-pahatongan'ny olon-kafa.
Raha manontany izy ireo hoe manao ahoana ny raibenao na nahazo izany fampiroboroboana izany ianao ary mizara fanavaozana momba ny fiainan'izy ireo, izany dia famantarana tsara kokoa fa manandrana mifandray indray izy ireo.
2. Hizaha fialan-tsiny tsy nahy izy ireo hifandraisana aminao.
Te hiresaka aminao izy ireo. Saingy sahirana izy ireo mitady fialantsiny hifandraisana.
Noho izany, mahazo hafatra an-tsoratra hafahafa ianao manontany hoe aiza io toerana nalehanao io izay nantsoina indray mandeha na toro-hevitra amin'ny toerana pizza tsara indrindra.
Ny fihetsikao manoloana ireo hafatra ireo dia afaka milaza aminao betsaka momba ny fahatsapanao ny taloha. Miezaha mametraka ny rantsan-tananao raha toa ny fahatsapanao fatratra na fahasambarana na fahasosorana na zavatra eo anelanelany.
3. Efa nanontany momba anao izy ireo.
Raha manana namana namana ianao, dia mety nanontany azy ireo momba ny fahasalamanao izy ireo, inona no antenainao, ary raha mahita olona ianao.
Mahaliana izy ireo ny zava-mitranga amin'ny fiainanao, fa ny avonavon'izy ireo kosa tsy mamela azy ireo hanontany anao.
4. Mampiseho fahalianana kely amin'ny fiainam-pitiavanao izy ireo.
Raha ny zavatra niainako, rehefa nihaona tamin'ny ex ho an'ny tranainy aho, dia tsy nandany fotoana be loatra amin'ny firesahana momba ny fitiavana vaovao.
Nandany ny fotoana izahay tamin'ny fampatsiahivana ny andro taloha sy ny fisamborana hetsika lehibe teo amin'ny fiainana, ary raha nanao ny marina foana izahay momba ny fifandraisanay vaovao, dia tsy nahatsapa ny filàna hikaroka antsipiriany momba azy ireo izahay. Satria lasa somary hafahafa ihany izany.
Fa raha manontany anao fanontaniana maro momba ny lehilahy na vehivavy vaovao eo amin'ny fiainanao izy ireo ary manadihady ny antsipirihany, dia mety te-hahafantatra ny zavatra tsapanao momba ny fitiavanao izy ireo mba hahafahan'izy ireo mamantatra na manana izy ireo na tsia vintana miaraka aminao.
5. Ataon'izy ireo mazava tsara fa mpitovo izy ireo, na tsia.
Lazainy aminao, indraindray tsy anontaniana akory izy ireo fa mpitovo izy ireo, mba tsy hanelingelina anao ary hampahafantaro anao fa mbola misy izy ireo.
Etsy ankilany, mety hanao ny mifanohitra tanteraka aminy izy ireo, indrindra raha mandà ny fihetsem-pony izy ireo.
Mety hanandrana hampahasaro-piaro anao izy ireo amin'ny filazany aminao fa nifindra izy ireo hijery raha mamaly ianao.
6. Toa saro-piaro izy ireo.
Na dia manandrana manadihady momba ny fiainanao mampiaraka aza izy ireo, dia tsy afaka mieritreritra ny famantarana ny fialonana.
Azonao atao ny milaza fa tsy faly marina izy ireo fa mandroso ary manandrana manakana ny alahelon'ny fialonana.
Raha mahita anao miresaka amina tovolahy na tovovavy hafa izy ireo dia toa somary tezitra na sosotra.
7. Manaiky ny anjara asany amin'ny zavatra tsy nety izy ireo.
Raha miaiky aminao izy ireo fa afaka mahatsikaritra ireo zavatra tsy nety nataon'izy ireo izay nahatonga ny fiarahana nifarana izy ireo, dia mety noho izy ireo tsy tian'izy ireo hanaitaitra eo aminao ny zavatra.
Mety noho izy ireo tsy te hanana fihetseham-po mafy eo anelanelanao, fa mety hidika koa izany hoe nahazo maso iray izy ireo amin'ny ho avy izay hiarahanareo roa.
Fantatr'izy ireo fa raha hitranga izany dia mila mihavana ianareo roa.
8. Mbola manana zavatra ao aminao izy ireo.
Raha mbola tsy lasa nitady ny hahita ilay jumper sy boky izy ireo, dia mety ho te hanana fialan-tsiny izy ireo mba hitazomana ny elanelana misy eo aminao.
Tian'izy ireo ny fialan-tsiny hahafahany mifandray aminao, ary tsy te-hanao tsipika mivaingana eo ambanin'ny fifandraisana izy ireo.
9. Mampihetsi-po izy ireo.
Rehefa mahita azy ireo ianao dia tsy manandrana ny ho eo amboninao rehetra izy ireo, fa mbola mahita fomba an-kolaka hifandraisana ara-batana, toy ny fanosehana ny tanany amin'ny tananao.
Raha tsy liana izy ireo dia ho azon'izy ireo atao tsara ny manazava izany amin'ny alàlan'ny fiantohana fa tsy misy fifandraisana ara-batana eo aminao mihitsy.
10. Niantso mamo ry zareo.
Na dia afaka mifehy ny fihetsiny aza izy ireo hifandray aminao rehefa mahonon-tena izy ireo, dia mirona hifandray rehefa nisotro zava-pisotro vitsivitsy izy ireo ary mahatsapa fahasahiana kely.
Te hiverina miaraka amin'ny sakaizanao taloha ve ianao?
Ankehitriny rehefa nahazo hevitra tsara kokoa ianao raha te hiverina aminao ny sakaizanao taloha, fotoana tokony hanapahan-kevitra raha izany no tena zavatra tadiavinao ao am-ponao.
Ireto misy fanontaniana mety apetrakao amin'ny tenanao:
1. Fa maninona ianao no nisaraka voalohany?
Saintsaino tsara ny antony nisarahanareo roa ary ataovy mahitsy amin'ny tenanareo raha toa ka tena afaka manararaotra ny fifandraisanareo raha te hanandrana hafa ianareo.
Misy zavatra tsy voavonjy. Raha namitaka anao izy ireo na nanandrana nifehy anao, ohatra, dia mety tsy hahatsapa ho tena fitiavana azy ireo intsony ianao.
Fa raha nihatakataka fotsiny ianareo roa satria tsy nandany fotoana be dia be ianao dia mety ho zavatra azonao alamina izany.
2. Ankafizinao ve ny maha mpitovo anao?
Rehefa mifarana ny fifandraisana, mpitovo indray mety hanaitra ny rafitra.
Indraindray dia mety ho fanambarana izany rehefa mankafy ny fahalalahana arosony ianao.
Amin'ny fotoana hafa, tsapanao fa tena tianao ny hoe anisan'ny mpivady.
Raha ilay teo aloha dia azonao atao ny manontany raha mametra ny fahalalahana vaovao azonao ny fiverenanao miaraka amin'ny vadinao taloha.
Raha ity farany ity dia zava-dehibe ny manontany raha mieritreritra ny hanandrana indray ianao noho ny maha irery anao, fa tsy noho ianao manana finoana lehibe fa hiasa ny fifandraisana amin'ity indray mitoraka ity.
3. Ahoana no ahitanao ny mampiavaka ny fifandraisana amin'ity indray mitoraka ity?
Nisy zavatra tsy dia marina teo aloha, raha tsy izany dia tsy niraraka ianao.
Noho izany, raha mieritreritra ny handroaka ny fifandraisana indray aza ianao dia mila mazava ny fomba tsy maintsy hanovana ny zavatra hiasa.
Avy eo, mila manao ny marina amin'ny fomba feno habibiana ianao ary mieritreritra raha tena misy ireo fanovana ireo. Raha tsy izany izy ireo, hisy zavatra hafa hitranga amin'ny fanindroany ve?
4. Nandany fotoana ampy ve?
Aleo avela hilona ny vovoka aorian'ny fisarahana alohan'ny hieritreretanao ny hamelomana indray ny tantaram-pitiavana.
Elaela vao mihena ny fahatsapana. Rehefa manao izany izy ireo vao afaka mandinika ara-dalàna ny toe-javatra.
Ary ny olona tsy miova mandritra ny alina. Raha afaka miverina miaraka amin'ny taloha ianao raha niova tamin'ny fomba iray na tamin'ny fomba hafa dia tsy azonao antenaina hitranga izany afaka herinandro na volana vitsivitsy.
Mety haharitra lavitra noho izany ny fanovana tena izy. Saingy tsy azo atao izany. Ny fisarahana dia mety ho nahatonga azy ireo (sy ianao) handinika ny fomba fiainanao fiainana sy ny fomba fitondran-tena ho mpiara-miasa.
5. Mety ho sambatra kokoa ve ianao miaraka amin'ny olon-kafa?
Na dia mbola tsy niverina tany amin'ny sehatry ny fiarahana aza ianao dia fahendrena ny mandinika raha mety hahita olona mety kokoa aminao ianao.
Azo antoka, ahazoana aina ny fahazarana ny sakaizanao taloha, saingy ampy ve izany?
Antony tsara tokony hiandrasanao fotoana fohy alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra izany. Mety tsy ho vitanao mihitsy ny maka sary an-tsaina ny tenanao miaraka amin'ny olon-kafa, na dia mbola maratra na mbola misaraka aza ny fisarahana.
Saingy rehefa mihena izany fanaintainana izany dia mety hahita fotoana vaovao hahitana fahasambarana miaraka amin'ny olon-kafa ianao.
6. Mitady zavatra mitovy amin'izany ve ianao mandritra ny fotoana maharitra?
Azo antoka fa mety faly ianao miverina miaraka amin'ny vadinao taloha, fa mandra-pahoviana?
Fantatrao ve hoe inona ny tanjon'izy ireo mandritra ny fotoana maharitra amin'ny fifandraisana? Mitovy amin'ny anao ve izy ireo?
Na nandray anjara tamin'ny fisarahanareo io na tsia, zava-dehibe ny fahalalana fa ny fahitanareo ny ho avy dia mitovy amin'ny azy ireo.
Izany dia mety hidika ho zavatra toa ny tianao ny ankizy, ary ny fotoana fohy, ary ny toerana tianao hipetrahana, ary ny fomba fiaina tianao.
Aza adino, na dia maniry anao hiverina aza ny sakaizanao taloha, dia tokony ho zavatra tianao ihany koa izany. Aza variana amin'ny fahalianan'izy ireo nohavaozina raha tsy mitovy ny zavatra tsapanao na raha tsy hitanao ny zavatra mandeha amin'izao fotoana izao.
Araka izay mety ho fandokafan-tena ho tanjon'ny fitiavan'ny olona iray indray dia tazomy ny lohanao ary araho amin'ny eritreritra sy fiheverana matotra ny fanapahan-kevitrao.
Ary aza maika hiditra amin'ny zavatra!
Mbola tsy azonao antoka izay hatao momba ny taloha? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Maninona ny mpivady sasany no tafalatsaka anaty fitsangatsanganana sy hiverenana miaraka
rahoviana no hiverina i becky lynch
maninona aho tsy afaka mijery ny mason'ny olona
Mbola any wwe i john cena
ahoana no ilazana raha tsy ao aminao ny bandy
tononkalo momba ny fanombohana eo amin'ny fiainana